Iindaba-Ulwakhiwo kunye nophuhliso lwemodyuli yekhamera
Ubume kunye nophuhliso lweemodyuli zekhamera
Iikhamera zisetyenziswe ngokubanzi kwiimveliso ezahlukeneyo ze-elektroniki, ngakumbi ukukhula okukhawulezileyo kwamashishini anje ngeefowuni eziphathwayo kunye neetafile, eziqhube ukukhula ngokukhawuleza kumzi mveliso wekhamera. Kwiminyaka yakutshanje, iimodyuli zekhamera ezisetyenziselwa ukufumana imifanekiso sele zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwizinto ze-elektroniki, ezemoto, ezonyango, njl. . Iimodyuli zekhamera ezisetyenziswa kwizixhobo ze-elektroniki eziphathwayo azikwazi kuphela ukubamba imifanekiso, kodwa zikwanceda izixhobo ze-elektroniki eziphathwayo ziqonde iminxeba yevidiyo ekhawulezileyo kunye neminye imisebenzi. Ngethuba lophuhliso lwezixhobo ze-elektroniki eziphathwayo eziya zisiba mbalwa kwaye zikhaphukhaphu kwaye abasebenzisi baneemfuno eziphakamileyo neziphezulu kumgangatho wokucinga weemodyuli zekhamera, iimfuno ezingqongqo ngakumbi zibekwa kubungakanani zizonke nakwizakhono zokucinga ngemodyuli zekhamera. Ngamanye amagama, imeko yophuhliso lwezixhobo ze-elektroniki eziphathwayo zifuna iimodyuli zekhamera ukuqhubeka nokuphucula kunye nokomeleza amandla okucinga ngokusekwe kubungakanani obuncitshisiweyo.
Ukusuka kubume bekhamera yefowuni ephathekayo, ezona ndawo zintlanu ziphambili zezi: isivamvo somfanekiso (esiguqula imiqondiso yokukhanya ibe yimiqondiso yombane), iilensi, imoil yelizwi, imodyuli yekhamera kunye nefilitha ye-infrared. Ikhonkco lomzi mveliso wekhamera linokwahlulwa libe yilensi, ilizwi lekhoyili yemoto, icebo lokucoca infrared, isivamvo seCMOS, iprosesa yomfanekiso kunye nokupakishwa kwemodyuli. Icandelo linomda ophezulu wobuchwephesha kunye nenqanaba eliphezulu lokuxinana kwemizi-mveliso. Imodyuli yekhamera ibandakanya:
1. Ibhodi yesekethe eneesekethe kunye nezinto zombane;
2. Iphakheji esonga icandelo le-elektroniki, kwaye isithuba sibekwe kwiphakheji;
3. I-chip photosensitive edityaniswe ngombane kwisekethe, icandelo le-chip photosensitive lisongelwe yiphakheji, kwaye icandelo eliphakathi le-chip photosensitive libekwe kwisisu;
4. Iilensi ziqhagamshelwe ngokuqinileyo kumphezulu wompahla; kwaye
5. Isihluzo esidityaniswe ngqo nelensi, kwaye silungiswe ngaphezulu komngxunya kwaye sijolise ngqo kwi-chip photosensitive.
(I) Isivamvo somfanekiso weCMOS: Ukuveliswa kweesenzi zomfanekiso kufuna ubuchwephesha kunye nenkqubo. Imakethi ilawulwe nguSony (Japan), Samsung (South Korea) kunye neHowe Technology (US), nesabelo sentengiso esingaphezulu kwama-60%.
(II) Iilensi zefowuni ephathekayo: Iilensi yinto ebonakalayo evelisa imifanekiso, ihlala inamalungu amaninzi. Isetyenziselwa ukwenza imifanekiso kwi-negative okanye kwiscreen. Iilensi zahlulwe zaba ziiglasi zelensi kunye neelensi zentlaka. Xa kuthelekiswa neelensi zentlaka, iilensi zeglasi zinesalathiso esikhulu sokubonisa (esincinci ngobude obufanayo) kunye nokukhanya okuphezulu kokukhanya. Ukongeza, ukuveliswa kweelensi zeglasi kunzima, izinga lesivuno liphantsi, kwaye iindleko ziphezulu. Ke ngoko, iilensi zeglasi zisetyenziselwa izixhobo eziphezulu zokufota, kwaye iilensi zentlaka zisetyenziselwa izixhobo ezisezantsi ezisezantsi.
(III) Imoto coil motor (VCM): VCM luhlobo lweemoto. Iikhamera zeselfowuni zisebenzisa ngokubanzi i-VCM ukufezekisa ukugxila okuzenzekelayo. Nge-VCM, indawo yeelensi inokuhlengahlengiswa ukubonisa imifanekiso ecacileyo.
(IV) Imodyuli yekhamera: Itekhnoloji yokupakisha yeCSP iye ngokuthe ngcembe yaba yinto ephambili
Njengoko imarike ineemfuno eziphezulu neziphezulu zokuceketheka kunye nokukhanya okuthe kratya kwee-smartphones, ukubaluleka kwenkqubo yokupakisha imodyuli yekhamera kuye kwanda ngokubalaseleyo. Okwangoku, inkqubo ephambili yokupakisha imodyuli yekhamera ibandakanya i-COB kunye ne-CSP. Iimveliso ezinamaphikseli asezantsi ikakhulu zipakishwe kwi-CSP, kwaye iimveliso ezinamaphikseli aphezulu ngaphezulu kwe-5M ikakhulu zipakishwe kwi-COB. Ngenkqubela phambili eqhubekayo, itekhnoloji yokupakisha ye-CSP ngokuthe ngcembe ingena kwi-5M nangaphezulu kweemveliso eziphezulu kwaye inokuba yinto ephambili yetekhnoloji yokupakisha kwixa elizayo. Iqhutywa siselfowuni kunye nokusetyenziswa kweemoto, isikali sentengiso yemodyuli sonyukile kancinci kule minyaka idlulileyo.